Shiinaha FRP Door saarayaasha iyo alaabada | Beihai Fiberglass
Jiil cusub oo albaab u ah deegaanka-saaxiibtinimo iyo tamar-ku-ool ah, kana fiican kuwii hore ee qoryaha, birta, aluminiumka iyo balaastigga. Waxay ka kooban tahay xoog sare maqaarka SMC, xudunta xumbada polyurethane iyo jir plywood.
keydinta tamarta, bey'ada saaxiibtinimo,
kuleylka kuleylka, xoogga sare,
miisaanka fudud, anti-daxalka,
jawiga wanaagsan, xasiloonida cabirka,
cimri dherer, midabo kala duwan iwm.
Albaabka FRP waa albaab jiil cusub oo deegaanka u roon oo tamar-ku-ool ah, kana fiican kuwii hore ee qoryaha, birta, aluminiumka iyo balastikada Waxay ka kooban tahay xoog sare maqaarka SMC, xudunta xumbada polyurethane iyo jir plywood. Waxay ka kooban tahay tamar-badbaadin, bey'ad-saaxiibtinimo, kuleylka kuleylka, xoog sarreeya, miisaanka fudud, ka hortagga daxalka, cimilada wanaagsan, xasiloonida cabbirka, cimriga dheer, midabada kala duwan iwm.
Est Raali ahaansho ahaan
1) Isku ekaansho run ah albaab alwaax alwaax dhab ah
2) Faahfaahin qaab-qoraaleed gaar ah oo qaab naqshadaysan
3) Racfaan xakameyn xaddidan
4) Qeexitaanka sare ee qeexitaanka
5) Muuqaalka iyo muuqaalka kor loo qaaday
Ction Shaqeynta Sare
1) Fiberglass-ka albaabbadiisa ma qodan doonaan, miridhku ma dhici doono
2) Qaab dhismeedka waxqabadka sare wuxuu diidaa midab beddelka iyo warping
3) Barxadda isku-darka la isku-hagaajin karo waxay xadideysaa hawo iyo biyo soo gelid
● Waxtarka Amniga & Tamarta
1) Xudunta xumbada Polyurethane
2) Xumbo bilaash ah CFC
3) Deegaanka u roon
4) 16 `` alwaaxa qufulka alwaaxa iyo saxanka amniga jamb ayaa diidaya soo gelitaanka qasabka ah
5) Xumeynta cadaadiska weatherstrip wuxuu ka hortagaa qaybaha
6) Muraayadaha qurxinta ee saddexda ah
Faahfaahinta albaabka Fiberglass
1. SMC doorka Maqaarka
Qalabka xaashida 'SMC sheet' waxaa lagu dhejiyaa caaryada oo la kululeeyaa oo lagu cadaadiyaa saxaafadda, ka dibna la qaboojiyaa oo la sameeyaa
1). Waxaan haynaa 3types oo ah dhammaystirka dusha sare (Oak, Mahogany, siman)
2). Qeexitaanka Skin doorka maqaarka
● Midab: Caddaan
● Cabbirka: 2138 * 1219 (Max)
● Qeybta: Maro adag, polyester aan qanacsaneyn, Styrene, filler ka-iman-ba'an, Zinc stearate, Titanium oxide
Qaab dhismeedka albaabkeena SMC
Jir alwaax ah (qalfoof) + SMC maqaarka albaabka (2mm) + Xumbo PU (cufnaanta 38-40kg / m3) + Cidhifka PVC (biyo xireen la xiray). Wadarta dhumucda albaabku waa 45mm (runti 44.5mm, 1 3/4 ”)
Midabka albaabka 3.FRP
Guud ahaan, albaabka la dhammeeyay ayaa la rinjiyeeyay ka dib marka la dhammeeyo. Waxaa loo qaybin karaa ranjiga lagu buufiyo iyo gacanta rinjiga la qalajiyey (Staining). Rinjiga rinji gacmeedka ayaa ka qaalisan, laakiin midabku waa ka badan yahay saddex-geesood khadadkuna waa kuwo nolol badan
Naqshadeynta albaabka 4.FRP (Naqshadaha Albaabka Dhismaha)
Qeybinta albaabka 5.FRP
Hore: Dheriga ubaxa FRP
Xiga: E-muraayad lagu tolay Xadhig Go 'Strand Mat